आस्था राउतको सुरक्षा जाँच गर्ने प्रहरी जवानले दिइन् उजुरी..हेर्नुहोस् ।
January 18, 2020 Daily News NepalLeaveaComment on आस्था राउतको सुरक्षा जाँच गर्ने प्रहरी जवानले दिइन् उजुरी..हेर्नुहोस् ।
३ माघ, काठमाडौं । प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठले आफूमाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी छन् ।विमानस्थलमा गायिका आस्था राउतको चेकजाँच गरेकी उनले आफू ड्यूटीमा रहँदा गालीगलौच र अभद्र ब्यवहार भएको भन्दै उजुरी दिएकी हुन् । उनको उजुरीमाथि कारबाहीका लागि विमानस्थल प्रहरी कार्यालयले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा पठाएको छ । […]
दुईजनालाई इँटाभट्टामा हालेको आ’रोपमा आलम जे’लमा, पाँच हजार मा’रेको स्वीकार्ने प्रचण्डलाई के हुने?
January 18, 2020 January 18, 2020 Daily News NepalLeaveaComment on दुईजनालाई इँटाभट्टामा हालेको आ’रोपमा आलम जे’लमा, पाँच हजार मा’रेको स्वीकार्ने प्रचण्डलाई के हुने?
काठमाडौं । मुलुकमा राजनीतिक दण्डहीनताको पराकाष्टा कति रहेछ भन्ने सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेको छ ।मुलुक शान्ति प्रक्रियामा हिँडेको १३ वर्ष पूरा भइसक्दा अझै द्व’न्द्वपीडितलाई न्याय दिइएको छैन । बे’पत्ताको खोजी भएको छैन । घाइतेहरुको उचित उपचार र पुनव्र्यवस्था भएको छैन । लु’टिएका सम्पत्ति फिर्ता भइसकेको छैन । […]
कांग्रेसको माग: एमसीसी सम्झौता पास गर,सभामुख छिटो चयन गर..
January 18, 2020 Daily News NepalLeaveaComment on कांग्रेसको माग: एमसीसी सम्झौता पास गर,सभामुख छिटो चयन गर..
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सभामुख चयन प्रकृया चाँडो सुरु गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई आग्रह गरेको छ। नेपाली का‌ग्रेसका सभापति तथा स‌सदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाकाे नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको कांग्रेसकाे संसदीय दलको बैठकले ६ गतेबाट सुरु हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट नै सभामुख चयन प्रकृया सुरु गर्न आग्रह गरेको हो। कांग्रेसले संविधान अनुसार सभामुख […]